- VidaBytes | သီအိုရီအောင်မြင်ပြီးပါက မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။ LifeBytes
သီအိုရီကို ကျော်ပြီး ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
Encarni Arcoya | 29/05/2022 10:27 | အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။ 31/05/2022 08:35 | သတင်းအချက်အလက်
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သီအိုရီကို စာမေးပွဲဖြေဆိုသောအခါတွင် သင်၏အာရုံကြောများသည် သင်စာမေးပွဲဖြေဆိုသည့်အခန်းအပြင်ဘက်တွင် ရှိနေသင့်သည်ကို သင်သိသည်။ သင်ထွက်သွားသောအခါ၊ သူတို့သည် သင့်ကို ချုပ်နှောင်ထား၍၊ ငါလွန်သွားပြီလား။ ငါမအောင်မြင်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ။ မှတ်စုကို ဘယ်အချိန်မှာ ရနိုင်မလဲ။ သီအိုရီကို ကျော်ပြီးရင် ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ လက်တွေ့ကားသင်တန်းတွေကို အခုပဲ တောင်းဆိုရမှာလား။
စိတ်မပူပါနဲ့၊ ပထမအဆင့်အနေနဲ့ သီအိုရီဆိုင်ရာ စာမေးပွဲကို အောင်ဖို့ဖြစ်ပြီး၊ ဒါကို သင်ပြင်ဆင်ပြီး DGT က သတ်မှတ်ထားတဲ့ ထောင်ချောက်ထဲကို မကျရောက်သရွေ့ ကျော်ဖြတ်ဖို့ လွယ်ကူပါတယ်။ ဒါပေမယ့်၊ ရလဒ်ကို တတ်နိုင်သမျှ မြန်မြန်သိဖို့တောင် ပိုလွယ်ပါတယ်။.
1 သီအိုရီအရ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရယူရန် ပထမအဆင့် စမ်းသပ်မှု
2 ငါ သီအိုရီကို လုပ်ပြီးပြီ၊ သူတို့က ငါ့ကို ဘယ်အချိန်မှာ မှတ်စုပေးမလဲ။
2.1 အာရုံလွဲပြီး မကြည့်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ။
3 သီအိုရီကို ကျော်ပြီး ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
3.1 သီအိုရီပညာရှင်၏ မှတ်စုကို ရယူရန် သူတို့ဘာတောင်းဆိုကြသနည်း။
3.2 ငါလုပ်ခဲ့တဲ့အမှားတွေကို ဘယ်လိုမြင်လဲ။
သီအိုရီအရ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရယူရန် ပထမအဆင့် စမ်းသပ်မှု
မင်းသိတဲ့အတိုင်း, သင့်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရယူရန် မဖြစ်မနေ စစ်ဆေးမှု နှစ်ခုကို အောင်မြင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။။ တကယ်တော့, နောက်တစ်ခုက အတည်မပြုဘဲ လုပ်လို့မရဘူး. ယာဉ်မောင်းကုဒ်၊ ဆိုင်းဘုတ် အစရှိသည်တို့ကို မေးမြန်းသည့် သီအိုရီစာမေးပွဲတစ်ခုအကြောင်း ပြောနေပါသည်။ ပြီးတော့ မင်းရဲ့ကားမောင်းပုံစံကို အကဲဖြတ်နိုင်အောင် မင်းမောင်းကျောင်းကားကို မောင်းခိုင်းရမယ့် လက်တွေ့စမ်းသပ်မှု။
ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းသည် "အပ်ချုပ်ခြင်းနှင့် သီချင်းဆိုခြင်း" မဟုတ်ပါ။ လူတော်တော်များများက အဲဒါကို ထုတ်ဖို့ အချိန်နည်းနည်းပဲ ယူပေမယ့် သူတို့က မြန်မြန်ဆန်ဆန် သင်ယူတဲ့အတွက် ဒါမှမဟုတ် သိပြီးသားဆိုတော့ တခြားသူတွေလည်း အချိန်ယူရပါတယ်။ တခါတရံ အာရုံကြောများက သင့်အပေါ်လှည့်ကွက်များ ပေးနိုင်သည်။
ပထမဆုံး ဖြေဆိုသော စာမေးပွဲမှာ သီအိုရီ စာမေးပွဲ ဖြစ်သည်။. သင်ကားမောင်းကျောင်းတွင် စာရင်းသွင်းရန် ရက်အတိအကျမရှိသော်လည်း၊ သင်ကိုယ်တိုင်တင်ပြရန်နှင့် သင့်လိုင်စင်ရရှိရန် x လကာလရှိသည်။ ဒါကြောင့် တစ်ပတ်၊ နှစ်ရက်၊ တစ်လ၊ နှစ်ရက်... အမြဲတမ်း အချိန်ယူရပါတယ်။ သင်တကယ်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဟု ခံစားရသောအခါ ၎င်းကိုပြုလုပ်ရန် အကြံပြုထားသည်။ လေ့ကျင့်မှုအတွက် သင်ပြုလုပ်သော စာမေးပွဲများတွင် အမှားအယွင်း2ထက်မပိုပါ။
ပြီးတာနဲ့ သီအိုရီကို ကျော်ပြီး ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ ကားမောင်းကျောင်းကို ထပ်ခါထပ်ခါ ဖုန်းခေါ်နေစရာ မလိုတော့တဲ့အတွက် သူတို့မှာ ရလဒ်တွေ ရပြီလားဆိုတာ ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ DGT မှာ သင်ကိုယ်တိုင် မြင်နိုင်ပါတယ်။. ဘယ်လိုလဲ? ငါတို့က မင်းကို ရှင်းပြတယ်။
ငါ သီအိုရီကို လုပ်ပြီးပြီ၊ သူတို့က ငါ့ကို ဘယ်အချိန်မှာ မှတ်စုပေးမလဲ။
သီအိုရီ မောင်းနှင်မှု စမ်းသပ်မှု ပြုလုပ်သည့် အခန်းမှ ထွက်သွားသည်နှင့် သင် အောင်မြင်သည် ရှိမရှိ သိရန် သံသယ နှင့် ကြောက်စိတ်တို့ ဖြင့် တိုက်ခိုက်ခြင်း ခံရသည်။
အမှန်တရားကတော့ စာမေးပွဲကို ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ သင်တွေ့လိမ့်မည်- ကွန်ပြူတာမှာ လုပ်ဖူးရင်, ဒါ အောင်စာရင်းများကို ညနေ ၅ နာရီ နောက်ပိုင်းတွင် ထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုနေ့၏ စာရွက်ပေါ်ရှိလျှင်ရလဒ်တွေ အနည်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်၊ နောက်နေ့ ညနေ ၅း၀၀ မှ.
အခု ဒုတိယကိစ္စမှာ ဆိုလိုတာက သူတို့ နောက်နေ့ရှိနိုင်ပေမယ့် ဒါက ပုံမှန်မဟုတ်ဘူး၊ ဆိုလိုတာက နောက်ရက်၊ နှစ်ရက်၊ သုံးရက်၊ တစ်ပတ်မှာ ရှိနေနိုင်တယ်။
စာရွက်ပေါ်တွင်ရှိနေပါက အချိန်အနည်းငယ်ကြာနိုင်သောကြောင့် စိတ်ရှည်သည်းခံစွာ ကိုင်တွယ်ပါ။
အာရုံလွဲပြီး မကြည့်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ။
သင်ကိုယ်တိုင် သီအိုရီပညာရှင်ထံတင်ပြပြီး အတန်းကိုမသိချင်ဘဲ အားလပ်ရက်သွားရသည့် အခြေအနေမျိုးဖြစ်နိုင်သည်။ နောက်မှကြည့်လို့ရလား။ ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး... ငါတို့ရှင်းပြမယ်။
DGT I တွင်၊စာမေးပွဲရလဒ်များကို နှစ်ပတ်ကြာတင်ထားသည်။. ထို့ကြောင့်၊ ထိုနှစ်ပတ်မတိုင်မီ မှတ်စုများကို မကြည့်ပါက၊ ၎င်းတို့သည် ပျောက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ရလဒ်ကို သင်မသိနိုင်ပေ။ ရည်ညွှန်းတာလား? မှတ်စုရရန် သင် DGT သို့မဟုတ် သင့်ကားမောင်းကျောင်းနှင့် စကားပြောရန် ကြိုးစားသင့်သည်။ကားမောင်းကျောင်းကိုယ်တိုင်က ၎င်းကို ၎င်း၏ကွန်ပြူတာတွင် ထားရှိခြင်းသည် ပုံမှန်ဖြစ်သော်လည်း၊ ထို့ကြောင့် ပြဿနာသိပ်မရှိပါ။
သီအိုရီပညာရှင်ရဲ့ မှတ်စုကို သူတို့ပေးနိုင်တဲ့ ဝေါဟာရကို သင်သိပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် ကြည့်ချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ဖြစ်နိုင်ပါသည်?
အမှန်တရားကတော့ ဟုတ်တယ်၊ တော်တော်လွယ်တယ်။ သင်လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာမှာ DGT စာမျက်နှာသို့ ဝင်ရောက်သောကြောင့် အင်တာနက်ကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အတိအကျပြောရရင် သွားရမယ်။ sede.dgt.gob.es/en/driving-licences/exam-notes.
အဲဒီစာမျက်နှာက မင်းကို ငါတို့လိုချင်တဲ့ အပိုင်းဆီ ပို့ပေးတယ်။ ဤနေရာတွင် သင်သည် ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုကို ရွေးချယ်နိုင်သည်-
လက်မှတ်မပါတဲ့။ ၎င်းတို့သည် သင့်အား မှတ်စုပေးနိုင်ရန် အချက်အလက်အချို့ကို ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Presencial ။ DGT တွင် လူကိုယ်တိုင် သွားရောက် တိုင်ပင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
လွယ်လွယ်ကူကူ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဖြစ်စေချင်သလို၊ ပထမ option ကိုသင်ရွေးချယ်သင့်သည်။.
သီအိုရီပညာရှင်၏ မှတ်စုကို ရယူရန် သူတို့ဘာတောင်းဆိုကြသနည်း။
ငါတို့အရင်က မင်းကိုပြောဖူးသလိုပဲ၊ လက်မှတ်မပါတဲ့ ရွေးချယ်ခွင့်က မင်းရဲ့သီအိုရီအဆင့်ကို မြင်နိုင်စေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့် အဲဒါကို မင်းကိုမပြခင်၊ ဒေတာအတွဲလိုက်တောင်းပါလိမ့်မယ်။ သင်ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်။ ဘာဒေတာလဲ။ ဖော်ပြပါ:
NIF/NIE. ဆိုလိုတာက မင်းမှာ ID နံပါတ်။
စာမေးပွဲရက်. မင်းပေါ်လာတဲ့ရက်အတိအကျ။ ဒီမှာ မင်းအဲဒါကို ထားရမယ်၊ မင်းလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာက မလိုအပ်ဘူး။
အတန်းခွင့်ပြုပါ။ A, B, C, D စာမေးပွဲ ဖြေဆိုပြီးပါက... မော်တော်ဆိုင်ကယ်များအတွက် A နှင့် ကားများအတွက် B ဖြစ်ပါသည် ။ ကျန်တစ်ခုသည် ပိုကြီးသော ယာဉ်များအတွက် ကတ်များ (ထရပ်ကားများ၊ ဘတ်စ်ကားများ...)။
မွေးနေ့စွဲ။ ၎င်းသည် ၎င်းတို့တောင်းဆိုသည့် နောက်ဆုံးအချက်အလက်များဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် သင်အမှန်တကယ်ဖြစ်ကြောင်း သေချာစေရန်ဖြစ်သည်။
အားလုံးမှန်ကန်ပါက၊ ဤဒေတာများကို သင်မြင်ရမည့် စခရင်တစ်ခုရပါမည်-
ကိုယ်ပိုင်သတင်းအချက်အလက်များ။ ဆိုလိုတာက နာမည်၊ နံမည်၊ ID... အဲဒါတွေ မှန်ကြောင်းစစ်ဆေးနိုင်စေဖို့ (အမှားရှိခဲ့ရင် အမြန်ဆုံးပြင်ပေးတာ ပိုကောင်းပါတယ်)။
ပုံစံ စမ်းသပ်မှု။ တကယ်လို့ သင်ဟာ သီအိုရီကို အောင်မြင်ရုံသာမက လက်တွေ့ပါ အောင်မြင်သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
စာမေးပွဲရက်။ ဘယ်အချိန်က ကိုယ့်ကိုကိုယ် စစ်ဆေးခဲ့လဲ။
အရည်အချင်း။ ဤသည်မှာ တောင်းဆိုမှု အများဆုံးဒေတာဖြစ်သည်။ ဒီနေရာမှာ "At" လို့ပြောရင် သင်ဟာ သီအိုရီကို အောင်မြင်ပြီးပြီဆိုတာ သိထားသင့်ပါတယ်။ "မသင့်တော်ဘူး" လို့ ပြောရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်တင်ပြဖို့ လေ့လာဖို့ ပြန်သွားရပါမယ်။
အမှားတွေလုပ်ခဲ့တယ်။ ၎င်းသည် သီအိုရီ စာမေးပွဲ (သို့မဟုတ် လက်တွေ့ စာမေးပွဲတွင်) အမှားတစ်ခုခု ကျူးလွန်ခဲ့သလား နှင့် ၎င်းတို့ ဖြစ်ခဲ့သည်ကို ရည်ညွှန်းသည်။
လူတော်တော်များများက လက်မခံလို့၊ ဘာအမှားတွေ လုပ်မိသွားလဲ သိချင်ကြတယ်။ သူတို့ဆီက သင်ယူနိုင်ဖို့။ ၎င်းတို့ကို ဆိုင်းငံ့ထားသူများသည် ၎င်းတို့ကိုလည်း တိုင်ပင်လိုကြောင်း DGT မှ သိရှိသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို သင်မြင်နိုင်စေရန်အတွက် ၎င်းတို့သည် အဆိုပါအပိုင်းကို ဖွင့်ထားသော်လည်း "ကုဒ်ဝှက်ထားသော" နည်းလမ်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ထားသည်။ ပြီးတော့ အဲဒါပါပဲ။ မင်းအမှားလုပ်ခဲ့တာကို အတိအကျပြောမှာမဟုတ်ဘူး။အမှားများ၏ လေးနက်မှုကား၊
ဟုတ်တယ်၊ လက်တွေ့ စာမေးပွဲ အကြောင်းသာ ပြောပြပါမည်။သီအိုရီအရ ၎င်းသည် သင့်အား အမှားအယွင်းအရေအတွက်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း မည်သည့်မေးခွန်းများဖြစ်ခဲ့သည်ကိုမူ ဖော်ပြမည်မဟုတ်ပါ။
လေယာဉ်မှူးအမှားများအတွက် သင့်တွင် သုံးခုရှိသည်-
ပပျောက်ရေးသော့များ။ ၎င်းတို့သည် ကြီးလေးသော ပြစ်မှုများဖြစ်ပြီး အကယ်၍ ၎င်းတို့ကို ကျူးလွန်ပါက စစ်ဆေးသူသည် စစ်ဆေးမှုအား ရပ်တန့်ကာ သင့်အား နေရာ၌ ဆိုင်းငံ့ထားနိုင်သည်။
ချို့တဲ့ခြင်း။ အဟန့်အတားဖြစ်စေသော အမှားများဖြစ်သောကြောင့် နှစ်ခုသာခွင့်ပြုသည်။
နူးညံ့သိမ်မွေ့။ ၎င်းတို့သည် သင့်အား 10 အထိခွင့်ပြုထားပြီး အပျော့ဆုံးဖြစ်သည်။
သီအိုရီကို ကျော်ဖြတ်ရင် ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲဆိုတဲ့ အဖြေကို သင်သိပြီးသားပါ။ မင်းအဲဒါကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ လေယာဉ်မှူးထံ မကြာခင် မင်းကိုယ်မင်းတင်ပြနိုင်ပါစေလို့ ငါတို့ဆုတောင်းတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - LifeBytes » သတင်းအချက်အလက် » သီအိုရီကို ကျော်ပြီး ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။